ဆားနဲ့ပါဘုရာ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ဆားနဲ့ပါဘုရာ့
Posted by DEPARKO DEPARKO on Feb 5, 2012 in Contributors, Copy/Paste | 17 comments
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပင်လယ်နယ်နမိတ်ရှည်လျှားသလို ကျွန်းတွေအမြောက်အများရှိလို့ ရေနေသတ္တ၀ါတွေ ပေါက်ဖွားဘို့ သဘာဝတရားကပေးထားတဲ့ အမွေအနှစ်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှေးရှင်ဘုရင်ခေတ်၊ အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး ရဲ့ ဆားနဲပါဘုရာ့ ဟာ ပေါ်ပြူလာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ရပါတယ်၊
သမီးလှကျွန်း(ဟိုင်းကြီးကျွန်းအနီး၊လိပ်ကျွန်းဟုလဲခေါ်)၊ကတုံးလေးကျွန်း၊ကဒုံကနိအနီး။မလိကျွန်း၊မော့စကော့ကျွန်းတန်း။ကိုကိုးကျွန်း၊အစရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းမှန်သမျှမှာ(လူသူမနီးသော)သဲသောင်တွေဟာ လိပ်မျိုစုံတို့ရဲ့ ပေါက်ဖွားရာ ဥဥဘို့နေရာတွေပါ၊
လိပ်ဥဟာ ပင်ပေါင်သီး အရွယ်အစားခန့်ရှိပြီး ပျော့စိစိနှင့် ဆီဖြင့်ကျော်ကျော်၊ ရေဖြင့်ပြုတ်ပြုတ်၊မာခဲခြင်းမရှိပါ၊ အကောင်းဆုံးစားရန်မှာ၊ ရေဖြင့်ပြုတ်ရာတွင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ရာ ၄င်းဆားအရသာသည် အခွံကိုဖြတ်သန်းပြီး အထဲသို့စိမ့်ဝင်သွားသဖြင့် အအေးခံပြီး အပေါက်သေးသေးဖေါက်ကာ တစ်စိမ့်စိမ့်စုတ်ရာတွင် ငန်မြမြ စိမ့်စိမ့်နှင့် အလွန်အရသာကောင်းလှလို့ ဗွီအိုင်ပီ လူကြီးများကို လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဧည်ခံကျွေးမွေးရာတွင် အလွန်မျက်နှာပန်းလှပြီး ရှင်ဘုရင့် ပညာစမ်းအမေးအထိပါလေတော့၊ လိပ်ဥရှာဖွေရေး အဖွဲ့တွေဟာ ကျွန်းတွေရဲ့ သဲသောင်ပြင်တွေမှာ လိပ်မတွေအလာ စောင့်ဆိုင်းရင်း။ သံချွန်လေးတွေကိုင်ဆောင်ကာ(လိပ်သွားရာလမ်းကြောင်း သံချွန်ဖြင့် သဲသောင်အားထိုးစိုက်ပြီး ဥကျင်းအားရှာရန်) လိပ်မတွေဟာ သူတို့ဥကျင်းကို ဖွက်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ သွားရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာတာတောင်ရှာမတွေ့တာ တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ လိပ်ဥရှာတတ်တဲ့ သူတွေတောင်မျက်စိလည်တယ်။
လိပ်မတွေဟာ သဘာဝကပေးတဲ့အသိနဲ့ လူသံ အနှောက်အယှက်သံကြားရင်ဥမဥတော့ဘဲ ပင်လယ်ထဲပြန်ဆင်းသွားတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဥကျင်းယက်ပြီးလို့ ဥစချတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့အနောက်ကနေ ဖင်အောက်ကတစ်ခါတည်းပုဆိုးခံဥယူနေတာတောင် မျက်ရည်တွင်တွင်ကျပြီး ဥချခြင်းကိုရပ်လို့ အောင့်ထားလို့ မရတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။
လိပ်ဥကို ဗွီအိုင်ပီပေးဘို့နဲ့ သူဌေးတွေကိုရောင်းဘို့ရှာဖွေနေကြတာ အလုအယက်ပါဘဲ၊ လိပ်မျိုးမတုံးစေဘို့ မွေး/ရေ က လိပ်ဌာနတွေကျွန်းတွေပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ပြီး လိပ်ဥသားဖေါက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေမဲ့ အားအလွန်ရှိစေပြီး အရသာအလွန်ကောင်းလေတော့ ဆားနဲ့ပါဖုရာ့
ခင်ဗျားတို့ ဥ အနှိုက်ခံရမှ မငိုကြနဲ့ 
၀ဋ်ဆိုတာ အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ
အဲလို ဥ လျှောက်လျှောက်နှိုက်နေကြလို့ ..ခင်ဗျားတို့ 
ဥပါလဲ အလဂါးဖြစ်နေကြတာ သိရဲ့လား
အင်း သည်ပို့ စ်ဖတ်ရင်း နဲ့ပထမ ဆုံး သတိရမိတာ က “စိန်ပေါက်ပေါက်” ကို ဘဲ ။
သူ့ မှာက လိပ်ရှိတာ ကလား ။
အဲဒီလိပ်အကြောင်းလဲ ရွာထဲက ဒေါက်တာကြီးများ တင်ပေးကြပါဦးလို့ ။
တစ်ဂယ်ထင်ပြီး ဥလနှိုက်နေမှ ဒုက္ခ
သဂျီးပြောဒေါ့ တိရစ္ဆာန်မှာ ခံစားတတ်တဲ့ အသိမရှိဘူးဆို…။ သဂျီးတွေ ကိလေသာမကုန်တဲ့ သက်ရှိတိုင်းမှာ တဏှာစွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့ အဝိဇ္ဇာအသိရှိသဗျ…။ လူလိုမပြောတတ်လို့သာ…
“ဥကျင်းယက်ပြီးလို့ ဥစချတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့အနောက်ကနေ ဖင်အောက်ကတစ်ခါတည်းပုဆိုးခံဥယူနေတာတောင် မျက်ရည်တွင်တွင်ကျပြီး ဥချခြင်းကိုရပ်လို့ အောင့်ထားလို့ မရတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။”
သဂျီးပြောဒေါ့ တိရစ္ဆာန်မှာ ခံစားတတ်တဲ့ အသိမရှိဘူးဆို…။
ဘယ်နှယ်.. တိရိစ္ဆာန်က.. နဗ့်ကြောတွေရှိတဲ့.သတ္တ၀ါပဲ..။ အဲ..ပြောရရင်..လူလည်း.. သတ္တ၀ါပဲလေ..။
လိပ်လည်း..ဥ ဥရင်..ညှစ်ရတော့ မျက်ရည်ထွက်မှာပေါ့..။
အဲဒီ ဆားနဲ့စားတဲ့အရသာကို.. လိပ်မျက်ရည်လောက်နဲ့တော့.. ဘယ်လဲပါ့မလည်း..။
အဲဒီလိပ်မကြိးနောက်များများမွေးနိုင်အောင်.. အစာကောင်းကောင်းကြွေး.. အန္တရယ်ကင်းအောင် ကူညီပေးလိုက်ရမှာပါ..။
ပိုအသိညဏ်ရှိတဲ့သူကတော့.. လိပ်ကလေးတချို့တလေပေါက်အောင်.. သေသေချာချာချန်ထားခဲ့ပြီး.. မျိုးဆက်မပြတ်အောင်.. ထိန်းသိမ်းပေးရမှာပါ..။
သဘာဝလောကရဲ့.. ဂေဟကိုတော့.. အသိညဏ်မြင့်တဲ့.. သတ္တ၀ါတွေ..(လူ) ကသာပိုနားလည်ပါတယ်..။
သဂျီးတို့ကတော့ လိပ်မကြီးဘေး အင်္ဂုလိမာလ သုတ် ထိုင်ရွတ်ပေးနေမလားပဲ
မြင်ယောင်ကြည့်ရုံနဲ့တင် အတော် ရီရတယ် …ဟီဟိ….
သဂျီးအုကို ဆားနဲ့တို့ စားခံရမှ အာဘားအာဘား မလုပ်နဲ့ 
ပါးစပ်ပါရင် အသားတိုင်း စားလို့ ကောင်းတာချည်းပဲ
စားလို့ ကောင်းတိုင်း ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းလုပ်ပြီး ကိုယ်ချင်းမစာ လိုက်စားနေလို့ ဖြစ်မလား
အုချင်းတူတာတောင် ဘဲဥနဲ့လိပ်ဥ မတူဘူးဗျ
ဘဲက ဥပြီး လစ်သွားတာ.
လိပ်ကသူ့ ဥ သူချစ်တယ်
သူချစ်တဲ့ဥကို ခိုးရင် သူဘယ်ကြိုက်မလဲ
သဂျီးဥကို ခိုးဖြုတ်ရင် သဂျီးကြိုက်မလားပြော
လိပ်မက ပြန်ထိုးလို့ ခုခံလို့ မရမှန်းသိလို့ .သိသိနဲ့အားမတန်မာန်လျှော့ပြီး မျက်ရက်စက်လက်ကျ ငြိမ်နေရတာ
လုပ်နိုင်ရင် သူ့ ဥနိုက်တဲ့လူတွေကို ကလဲ့စားချေပြီး အဲဒီလူတွေဥကိုလဲ ပြန်နိုက်မှာပေါ့
ခင်ဗျားတို့ ဥတွေ သတိနဲ့ သာစောင့်လျှောက်ပေတော့
ဟေ့ ရှေ့ ကစိန်ပါတယ်။
တော်ကြာလူမှားပြီး ကိုပေါက်ကို မာမီပေါက်မှတ်နေအုံးမယ်။
အုဖြုတ်ပြီးဆားနဲ့ တို့ ပလိုက်မယ်
အော် လိပ်တွေဘဝကလဲ နောက်ကနေ လုံချည်နဲ့ ခံနေတာကို တောင်ဥချနေတာရပ်မရဘူးဆိုတော့
“ဥကျင်းယက်ပြီးလို့ ဥစချတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့အနောက်ကနေ ဖင်အောက်ကတစ်ခါတည်း ပုဆိုးခံဥယူနေတာတောင် မျက်ရည်တွင်တွင်ကျပြီး ဥချခြင်းကိုရပ်လို့ အောင့်ထားလို့ မရတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ” ဒီစာသားလေးဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ …………
လူတွေက အသိဥာဏ်ရှိသလောက် ၇က်စက်ကြတာပါ။
အဲဒါပေါ့ လူတွေ လူတွေ ……။ ကိုယ့်ဥ မှ ကိုယ်ခင်တယ်ဆိုတာ ….။ သူများ ဥ ကျတော့ ဖြုတ်ပြီးတလုပ်ပြည် ပို့တယ်…။ သုံးသိန်းဆိုလားပဲ………….။
ငှက်တွေက ဥကို ရင်ငွေ့ပေးပြီး ၀ပ်ပေးတယ် လိပ်ကတော့ ကိုယ်ကလေးတွေကို ဖြူသလား မဲသလားတောင်
မကြည့်ဘဲ စွန်ြ့ပစ်ခဲ့တယ် အကြင်နာ ကင်းရာမှာ လိပ်ကို ဘယ်သတ္တ၀ါမှမှီဘူး
ကျွန်တော်တွေ့တာကိုပြောတာနော် ၀ဋ်လည်မှာစိုးလို့ လိပ်ဥတောင်မစားရဲခဲ့ပါဘူး